चारपांग्रेको सुप - परिहास - नेपाल
राजधानीको मुटु नै ठिहिर्‍याउने जाडो सही नसक्नुको छ । चिसोबाट बच्न खसीको खुट्टाको सुप सबैभन्दा राम्रो खान्की हो । डाक्टरहरु पनि जाडो महिनामा चौपायाका खुट्टा भकभकी पकाएर खान सुझाउँछन् । यस्तै सिंहदरबारभित्र सरकारी जागिरे एक समूहलाई पनि यसपटकको जाडोबाट राहत पाउन कुनै डाक्टरले चौपायाका खुट्टा खान सुझाएछन् । सिंहदरबारको कुनाकाप्चा चहार्दा पनि डाक्टरले भनेजस्तो चौपाया पाउन नसकेर हैरान भएकै बेला बिचराहरुको नजर सफा चिटिक्क परेको नाअप ३२४ नम्बरको चारपांग्रेमा पर्‍यो । कर्मचारीले त्यही चार पांग्राकै सुप खाएर भए पनि यसपटकको जाडोबाट जोगिन प्रयास गरे । तर, बिचराहरु सुप खानै नपाई प्रहरीको पन्जामा परे । तिनीहरुको के दोष ? दोष त सिंहदरबारको हो । किन त्यहाँका कर्मचारीलाई जाडोमा सुप खाने व्यवस्था गरेन ? अनि, किन त्यति राम्रो चारपांग्रेलाई खुला रुपमा छोडियो ? यो जवाफ कसले दिने ?